Ukugibela amahhashi | Amahhashi eNoti
Njengoba sesishilo, kuningi imikhakha yezemidlalo yamahhashi, phakathi kwabo ukugibela, okuthi noma kubonakala kufana nezinye izinketho, lokhu kuqukethe ubuciko bokugcina ukulawula okunembile phezu kwehhashi, ngaphezu kokwazi ukuthi kufanele kuliphathe kanjani, ukugibela kusho ulwazi oludingekayo ukunakekela amahhashi nokusetshenziswa kwemishini okumele siyisebenzise.
Kulesi sikhala ungathola konke okuphathelene nezwe lokugibela amahhashi namahhashi. Ngeke sikhohlwe ukuthi ngumdlalo okufuna kakhulu nokuthi kufanele sizinakekele kahle izilwane zethu, ngezinto zokwakha ezinhle nokudla okuhle ukuze amahhashi akwazi ukwenza kahle kakhulu, ngaphezu kokuba nodokotela bezilwane bekhona kakhulu, ukuze izilwane zethu zingabi nezinkinga ezingenakulungiswa.
Ukulimala okuvamile lapho ugibele ihhashi
Ukugibela amahhashi kungumsebenzi wezemidlalo lapho umgibeli esebenza khona izindawo eziningi zomzimba. Isiza imisipha yethoni, igcine ...
Ufunda kanjani ukugibela ihhashi
Ihhashi lingesinye sezilwane ezithobekile futhi eselivumelanise kangcono nempilo ne ...
Isifundo sakho sokuqala sokugibela
Lesi kuzoba isifundo sakho sokuqala sokugibela. Mhlawumbe wawusuke wagibela ihhashi ngaphambilini, lapho usumdala ...
Ukufaneleka kwabagibeli: ukuvivinya imilenze
Ukugibela, ngaphandle kwemibono yakhe, kungumdlalo. Uma kungenjalo, ngitshele ...
Ukulungiselela umgibeli ngokomzimba
Umgibeli okhokhelwayo kungadingeka agibele amahhashi amaningi ngosuku olulodwa, futhi ngokuqhubekayo. Futhi yize ziningi ...
Ukufudumeza ihhashi ngaphambi kweseshini yokuziqeqesha (I)
Njengathi, ngaphambi kokuzilolonga kwezemidlalo kufanele sizelule futhi sinyakaze kancane, nehhashi kumele lenze okufanayo….
Izintambo ezisizayo nezingozi zazo (III): ichambon
I-chambón uhlobo lwamandla okusiza esingabiza enye yezinketho ezithambile. Ikhona…
Ungalilawula kanjani ihhashi elinetwetwe ngaphandle kokufa uzama (V)
Ukuyekiswa kokumiswa kwekhanda lehhashi
Namuhla sizokhuluma ngokuyekiswa ukusebenza, noma njengoba uJuan Francisco F. Muñoz ethi "ukukhama isibani sokukhanya." I "uncontract!" Ebusisiwe Yebo…
Imikhakha yama-Olympic yamahhashi
Sekuyiminyaka engaphezu kwekhulu, ukugibela amahhashi kubhekwe njengengxenye yeMidlalo yama-Olimpiki, hhayi ...
Izingozi zokuwa ehhashini
Kuyiqiniso ukuthi kusuka kule bhulogi sikhuthaza abantu ukuthi bafinyelele ukugibela amahhashi noma ngaphakathi ...